‘माओवाद’ त्यागेकोे माओवादी केन्द्रले चुनाव चिन्ह बचाउन सक्ला ?
चैत १४, काठमाडौं ।
‘छोरा पाउने कहिले कहिले, कम्मर दुख्छ अहिले’ भन्ने नेपाली लोकोक्तिलाई सम्झाउने किसिमबाट नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र (माके)बीच पार्टी ‘एक’भएपछि चुनाव चिन्ह के हुने ? भन्ने विषयमा गम्भीर विवाद भएको छ ।
भलै, राजनीतिक पार्टीको चिन्ह बोकेर भाग लिने चुनाव अब कहिले हुन्छ ? वा पाँच वर्षपछि ‘हुने’ संसदीय चुनावमा अहिलेका फरकफरक चुनाव चिन्हमध्ये कुन चाहिंलाई बोक्ने भन्ने विषयले पार्टी ‘एकता’को हिसाबकिताबमा एमाले र माकेबीचका ठूला नेताहरुबीच नै विवाद शुरु भएको छ । स्रोतका अनुसार दुवै पार्टीका शीर्ष नेताहरुले तलसम्म आ–आफ्नै पार्टीका चुनाव चिन्ह कायम गराउन गोप्यतवरले लबिङ गर्न उक्साइरहेका छन् । सोही अनुरुप ठूला नेताहरुले चिन्हबारे माथिभन्दा तलबाटै मिलाउनुपर्ने तर्क ‘एकता’का विधान लेख्नदेखि आवश्यक वातावरण बनाउन गठित संयुक्त कार्यदलभित्र आ–आफ्नै अडान राखिराखेका छन् ।
कार्यदलमा रहेका एमालेका नेताहरुले सूर्यचिन्ह नै लोकप्रिय रहेको भन्दै यसैमा अडान राखेका छन् भने माकेले शान्तिप्रक्रियापछि पहिलो संविधानसभाको चुनावदेखि नै जनतामाझ् प्रयोगमा आइसकेको हसियाँ हथौडा नै कायम हुनुपर्ने अडान राखिराखेका छन् । यसबाट एकताको थप विषयमा कार्यदल अगाडि बढ्न नसकेको कार्यदलका एक सदस्यले बताए ।
माकेका अध्यक्ष प्रचण्डले पछिल्लो समयमा फरकफरक कोणबाट कुरा राख्न थालेको र ‘एकता’ नभएपनि नहोस् जस्तरी सार्वजनिक मञ्चहरुमा मात्र नभई दुई पार्टीको औपचारिक बैठकमा प्रस्तुत हुन थालेको स्रोतको भनाई छ । ‘प्रचण्डले केही दिनेदेखि एक भएपछिको पार्टीमा दुईजना अध्यक्ष रहनुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन्’ कार्यदलका एमालेका एक सदस्यले बताए । यस्तैबीच मंगलबार मात्र माकेका प्रभावशाली नेता मानिने टोपबहादुर रायमाझीले ‘पार्टी नेतृत्व हैसियत समान नभए पार्टी एकता हुँदैन’ भनेर कडा अभिव्यक्ति दिएका छन् । रायमाझीको अभिव्यक्तिलाई एमालेका नेताहरुले गम्भीर रुपमा लिएको बताइन्छ ।
अहिले फेरि चुनाव चिन्हको विषयलाई लिएर पार्टी मिलाउने विषयमा प्रवेश गराएर भाँड्न चाहने तत्वहरुलाई सहयोग पुर्याएको भन्ने बुझाइमा एमालेका दोस्रो दर्जाका नेताहरु पुगेका छन् । धेरै पछि हुने चुनावमा बोक्ने चिन्हलाई लिएर एकता प्रक्रिया रोकिन नहुने पक्षमा एमाले रहेको बताइएको छ । ‘पाँच वर्षसम्म यही अवस्था रहनेवाला छैन । देशमा स्थायित्व आइसकेको छैन । चुनाव हुन्छ कि जनमत संग्रह । सधैं त्यसकारण आफू मात्र हुन्छन् जस्तो गरी चिन्हको बहस ल्याइएको छ । यो तरिकाले ‘पार्टी एकता’को यात्रा नै अवरुद्ध हुन सक्छ’ एमालेका एक पोलिटब्यूरो सदस्यले भने ।
दुवै पार्टीले आगामी बैशाख १० गते पार्टी एक भएको घोषणा हुने कुरा सार्वजनिक मञ्चहरुबाट बारम्बार बोल्दै आइरहेका छन् । शीर्ष नेताहरुले विषयको टुंगो नलाग्दै जथाभावी बोलेकै कारण विरोधीहरुलाई खेल्न सजिलो भएको एमाले नेताहरुको बुझाई रहेको छ । विश्वस्त स्रोतले जनाएअनुसार माकेका अध्यक्ष प्रचण्डले आफूहरुले एकतापछि बन्ने पार्टीको मार्गनिर्देशक सिद्धान्तमा माओवाद त्यागेका कारण नाम र चिन्हमा एमाले नै लचक हुनुपर्ने जबर्जस्त आशयपूर्ण धारणा अझै छाडेका छैनन् ।
अर्को कुरा, यो बहसले चुनाव हुने कहिले कहिले ? अथवा संसदीय चुनाव हुन्छ कि अर्थोकै चुनाव हुन्छ, टुंगो छैन ? तर चिन्हलाई लिएर आफू र अाफ्नो पार्टीलाई सर्वकालिक वा अविनाशीको रुपमा बुझ्न छाडेका छैनन् ।
कार्यदलका सदस्यहरू चुनाव चिन्हमा आ–आफ्नो अडानमा कायमै रहेकै कारण बैठकमा गरिने छलफलमा निष्कर्ष निकाल्न नसकेको एक विधान मस्यौदाकारको भनाई छ । गोलाकारभित्र हसियाँहथौडा चिन्हले मात्र कम्युनिस्टको भाव समेट्ने दाबीसहित त्यसैमा एमालेलाई सहमति जनाउन माकेका नेताहरुले बल गरिरहेका छन् । तर एमालेले आफ्नो पार्टी ठूलो भएकोले पार्टीको नाम र चुनावी चिन्हमा माकेले सहमति जनाउनुपर्ने जोड गरिरहेको छ । विवादकै कारण बैशाख १० मा ‘एकता’ घोषणा टर्ने निश्चितप्रायः देखिएको छ ।
यससँगै सिद्धान्ततः माओवाद त्याग गरेको माकेले चुनाव चिन्हबारे के निर्णय गर्ला ? त्यो हेर्न बाँकी छ । आफ्नो अडानबाट पछि नहट्न माकेका पार्टी पंक्तिबाटै नेतृत्वलाई दबाब परेको माकेका एक प्रभावशाली नेताले बताए । यसै विषयमा अरु केही नभएपनि चुनाव चिन्ह चाहिं हामीलाई नै छाडिदिनु पर्यो भनेर एमालेसँग बिन्ती गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्ने एक राजनीतिज्ञले विश्लेषण गरेका छन् । अनलाइन डबलीबाट